Isimangalo sokuqashelwa amalungelo impahla, isampula ukubhala isitatimende kwesimangalo
Omunye izinhlobo amalungelo ezakhamuzi kuyinto ilungelo impahla. Kungenzeka ukusebenza kwalesi umthetho kanye nokuvikelwa yayo bunikezwa uhlelo umphakathi, kufaka zonke izinyathelo ezidingekile izindawo yenhlangano, kwezomnotho kanye nezinye ithonya. State ezimbili izinhlobo ngezimali eyabelwe zona ukuze kuvikeleke nokubuyiswa komhlaba amalungelo endawo anikezwa. Lokhu izimali zangempela zomthetho futhi isibopho. Lo mqeqeshi owake wapheka (yangempela futhi zomthetho) yilezi ezilandelayo: yesimangalo sokuqashelwa amalungelo impahla, isimangalo (lokusebenza) on the ukuqedwa ukwephulwa zomthetho ezahlukahlukene akuhlobene bokuhlukaniswa impahla, kanye isenzo yokutakula amalungelo impahla ezandleni abanikazi emthethweni. Elinye iqembu kwezimali kukhona izindlela ezingokomthetho lesibopho. Lena - isenzo umonakalo kumnikazi impahla, isidingo (icala) on the ukubuya impahla ngephutha atholwe noma ezinye izimpahla, kanye lokufuna ukubuya komhiaba ekupheleni ethemini ukuqasha noma olunye uhlobo ukusetshenziswa.
Isimangalo sokuqashelwa kobunikazi ummangali ebhalwe ngumnikazi, ukufuya noma cha ukuthenga indawo ogama amalungelo adicilelwe noma inselele ummangalelwa noma omunye umuntu wesithathu. Okulandelayo, isicelo sithunyelwa ngokuqondile egunyeni zokwahlulela. Isisekelo nokufakwa isitatimende kwesimangalo kukhona tinhlelo (constitutive) isitifiketi ilungelo impahla. Njengoba ubufakazi ingasetshenziswa ezihlukahlukene ubufakazi, eqinisweni eqinisekisa ubunikazi uphikise amalungelo yomnikazi yangempela. LobuFakazi angasetshenziswa ukuvikela amalungelo ubunikazi ezimeni ifa.
Ngokwesibonelo, cabanga nesinxephezelo ukuqashelwa ilungelo impahla ngendlela ifa impahla kanye namanye amalungelo. Lokhu lokufuna ukuqashelwa kobunikazi of ngokulandelana enkantolo futhi kufanele siphathe wonke idatha ezidingekayo kanye nokwaziswa ngesisekelo okufanele kusebenze kiyo ijaji ngakho esenqumile Ukuvikelwa, ukubuyiselwa noma ukudluliselwa amalungelo endawo kumnikazi omusha. Ngu le dokhumenti ngempela isicelo ikhophi amazwi anjengokuthi, kokuthola ekukhokheni izimali, yonke imibhalo esiqinisekisa izibopho zomkhaya yommangali kumuntu oshonile, kanye imibhalo efakazela ubunikazi oshonile ngesakhiwo. Ngempela isicelo sicashunwa ebhukwini umhlaba nezinye amadokhumenti omthetho nihlola kwalezizimo.
Isimangalo sokuqashelwa amalungelo impahla, isampula engatholwa kunoma iyiphi ukuma emahhovisi ummeli olungisa izivumelwano futhi izinkantolo wesifunda, amahhovisi abameli 'nezinye izikhungo ezikhethekile, esihlelwe ngomumo ifomu elilandelayo. Igama lokuqala kulotshiwe isikhungo zokwahlulela, okuyothi uthola lesi simangalo. Lokhu kulandelwa ulwazi kummangali: igama eliphelele, ikheli lasekhaya ezinemininingwane. Ngemva imininingwane obucacisiwe ummangalelwa nezinye besithathu ezihambelana lesi simangalo sokuqashelwa kobunikazi. Qiniseka ukuthi ukhombise inani isimangalo. Futhi engxenyeni eyinhloko isicelo kubonisa degree of nokuzwelana ne oshonile, uhlobo impahla ngofuzo (ingcebo, imali noma ezinye.) Futhi indawo yayo.
Abameli futhi ukhombise idatha yokubhaliswa ubunikazi (ubani Niphiwe nalapho). Isitatimende echazwe futhi izimo ekuvimbeleni nokubhaliswa amalungelo anjalo. Ngokusho the Civil Code of the Russian Federation ngaphansi inombolo 1112 libhekisela ifa iyiphi impahla (kuhlanganise ingcebo), kanye ekhona amalungelo impahla kanye nezibopho oluvelele. Futhi ilungelo lokuthola ifa kuqinisekiswa State ngesisekelo imithetho yokuthi ngiyingane yokutholwa, futhi lelo yilungelo eliqinisekiswe sihloko ngokomthethosisekelo, inombolo 35, e ingxenye yesine. Ukuvikelwa kwamalungelo civil awo wonke umuntu ngokomthethosisekelo kusekelwe izihloko evunyiwe Code Civil by ukuqashelwa egcekeni umthetho (Isigaba 12). Ngakho, wafaka ngokomthetho abathi sokuqashelwa amalungelo impahla nesisekelo sangempela ukuze kuhlolwe inkantolo.
Ngokuhlola zonke izimo amazwi anjalo kwesimangalo, inkantolo 'Uyakuyaleza isinqumo sayo ngendaba ukuqashelwa ilungelo lokuba nendawo yabo noma cha. Ngakho-ke, kufanele kuqondwe ukuthi isimangalo ukuqashelwa kobunikazi - lena nje ekuqaleni nokwamukela ifa, ukubuyisela noma ukuvikela amalungelo i- zobunikazi esisemthethweni impahla.
Izigaba Okomphakathi sabantu: yencazelo, incazelo kanye namalungelo
Isivumelwano ezengeziwe inkontileka
Inkontileka Commission: izibopho amaqembu
Pte elikhulula? I lobuchwepheshe ekusebenzeni nojantshi
Imisebenzi yokuthengisa umsizi esitolo
Qala izinjini. Soft ukuziqalela motor
Ibukeke kwesihlahla se-okhi izimbali
"I-Reosorbilakt": imiyalo, izibuyekezo, intengo
Igama lakho langempela uTanya ka "Uni", noma kanjani ukuba umdlali waseshashalazini uValentina Rubtsov eyodwa indima
Izinketho kanambambili eRussia. Ukuthuthukiswa Amathemba
Lokho sizogqokani ekwindla. Lezingubo nenkathi ebandayo
"Akekho ibhizinisi lami, mina angazi lutho." Kukhona izinhlangano ongaziwa etemibhalo
Ibhizinisi umqondo emkhakheni amasevisi: iseluleko nezinketho
Adume kakhulu aphambe World of Tanks
Cats zinhlobo elite: incazelo, isithombe